Google Maps application inodzokera kuApple Watch | Ndinobva mac
Google Mepu inodzokera kuApple Watch
Kubva nhasi unogona kuisa zvakare Google Maps pane yako Apple Watch. An app isingatombofaniri kunyangarika kubva kuApple Watch iri kudzoka kudzoka. MunaGunyana 2015, Google Mepu yakave inoenderana neyekutanga Apple Watch yenguva iyoyo.
Asi mushure memakore maviri chinhu chakamira kushanda, uye chishandiso chakamira kuve nerutsigiro rwe software uye zvigadziriso kubva kuGoogle zveApple smartwatch muna2017.Zvino zvinoita sekunge mvura dzave kudzokera munzira yavo, uye kubva nhasi Google Mepu ine yako yega app WatchOS 6.
Google Mepu yadzokera zviri pamutemo ku Apple Watch, kutanga nhasi, uye iwe unotova neyako yeAppOS-inoenderana neapp. Chikumbiro icho chingadai chisina kumbosiya Apple smartwatch.
Google yakatanga kuzivisa kuti Google Mepu yaizodzoka kuApple Watch mwedzi wapfuura. Paive neyekutanga Google Mepu app yeApple Watch, asi Google yakabvisa kubva kuWatchOS mukati 2017.
Kubva nhasi Nyamavhuvhu 9, yazvino Google Mepu vhezheni 5.51 yekuvandudza yave kuwanikwa yeApple Watch pane App Store.
Iyo Anwendung ndeye yakagadziridzwa vhezheni yepakutanga yeiyo watchOS, ine tarisiro padanho-nhanho mirairo uye inofungidzirwa nguva dzekuuya. Kufanana Apple Maps, Google's navigation platform inotora mukana weiyo haptic yechigadzirwa kuti ipe kutarisisa kumushandisi.
Vashandisi havazokwanise kuisa kero kana nzvimbo dzakananga kubva kuApple Watch, asi ivo vanokwanisa kuwana nzvimbo dzakachengetedzwa kare kana kuenderera nerwendo rwakatangwa pa iPhone.
Iyi vhezheni yakaganhurirwa ne mashandiro echishandiso. Asi, sezvazvakaitika kare, kumabasa akaomarara uye masevhisi eGoogle Mepu, iyo iPhone pachayo ichafanirwa kushandiswa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Google Mepu inodzokera kuApple Watch
Flexibits Chatology ichabviswa kubva kuMac App Store munguva pfupi
Iwe haugone kusaina neApple paEpic munaGunyana 11